तपाईंको आफ्नै डगफुड खाना | Martech Zone
तपाईंको आफ्नै डगफुड खाना
शुक्रबार, फेब्रुअरी 6, 2009 आइतबार, अगस्त 23, 2009 Douglas Karr
तपाईंले यो शब्द इन्टरनेटमा थोरै प्रयोग भएको पाउनुहुनेछ। जब म बारेमा कुरा गर्छु कर्पोरेट ब्लगि, म यो शब्द प्रयोग गर्छु किनकि हाम्रो कम्पनीको सीधा ... कर्पोरेट ब्लगि fromबाट आउँदछ।
त्योले भने, यो एक प्रेरणादायक फोटो हो जुन मैले StumbleUpon मार्फत भेट्टाएँ स्कट रोपको ब्लग। तपाईंको आफ्नै डगफुड खाने बारेमा कुरा गर्नुहोस्!
तपाइँको आफ्नै उत्पादन समावेश गरेर तपाइँ कस्तो किसिमको विज्ञापन प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ? यसको केहि थप उदाहरणहरू हेर्न मद्दत गर्दछु!
टैग: डाटा डेलिभरी सेवाडाटा व्यवस्थापनअसफलता: सफलताको रहस्यखोजी ईन्जिन मार्केटिंग लगानीमा फिर्ताठोकरWordPress
यो बजारका लागि सजिलो छैन
फेब्रुअरी १,, २०११ 6:१:2009 अपराह्न
B2B मार्केटिंगलाई अधिक हडताल गर्ने, यस प्रकारको यादगार प्रदर्शनहरू आवश्यक छ।
एक प्रतिलिपि लेख्ने पिल्लाको रूपमा, मैले मेरो पुस्तकको लागि एउटा काम गरें: यस जेलमा एक मानिस थिए जसलाई सेल ढोकामा क्रिप्टोनाइटको बाइक लकले बन्द गरी राखेका थिए। शीर्षक केवल 'बाइक चोर' थियो।
डग, यद्यपि यसले एक महान तस्बिरको लागि बनाउछ, सत्य, मेरो विचारमा, यो खराब मार्केटिंग गर्दछ।
वास्तवमा, यो नक्कली पैसाको शीर्षमा स्ट्याक गरिएको वास्तविक मुद्राको केवल $ 500 थियो, र मानिसहरूले यसलाई भ break्ग गर्न को लागी उनीहरूको खुट्टा मात्र प्रयोग गर्न सक्दछन्। एक सुरक्षा गार्ड उपस्थित थियो र यो सुनिश्चित गर्न को लागी कसैले नियमहरु भ broke्ग गरेनन र यदि मानिसहरुले पैसा भ people्ग गरेमा पैसा राख्नु हुँदैन। -GizModo
मलाई लाग्छ कि यो पदोन्नति कम्तिमा थोरै भ्रामक छ, किनकि केवल केहि सय पैसा राख्नु र सुरक्षा उपस्थित हुनुले उत्पादको बारेमा दाबीहरु वास्तविक क्षमता भन्दा बढी देखाउँछ। हैन तपाईं तपाईंले यी तथ्यहरू फेला पारे पछि अलि अलि अलि महसुस गर्नुहुन्छ?
यो वास्तवमै "तपाइँको आफ्नै डगफुड खाने" को पनि उदाहरण होइन। तपाइँको आफ्नै व्यवसाय चलाउन प्रयोग गरेर बनाउनु भएको अनुप्रयोगहरूमा परीक्षण गर्न यो सफ्टवेयर उद्योग हो। यो is तपाइँ कम्पेन्डियममा केहि गर्नुहुन्छ, तर सार्वजनिक प्रदर्शनमा केहि घण्टाको लागि लगभग सम्पूर्ण नक्कली पैसा र सुरक्षा गार्डको एक ढेर राख्नु तपाइँको उत्पादन मा तपाइँको व्यवसाय चलाईरहेको छैन। 3M वास्तवमा "आफ्नै डगफुड खाँदै" हुनको लागि, उनीहरूले कर्पोरेट सम्पत्तिहरू बचाउनको लागि आफ्नो सुरक्षा गिलास प्रयोग गर्नुपर्नेछ।
व्यक्ति इमानदारीता र सम्मानका साथ व्यवहार गर्न योग्यका छन्, र गर्वका साथ तपाईले बनाउनु भएको उत्पादनहरू प्रयोग गर्नु उनीहरूलाई यो देखाउनको लागि एक उत्तम तरिका हो कि तपाईं आफ्नो काममा विश्वास गर्नुहुन्छ। झूटा बज उत्पन्न गर्न एक नियन्त्रित फोटो- op सँगै राख्नु पूर्ण रूपमा इमान्दार र आदरणीय भन्दा कम देखिन्छ। यो एक स्टन्ट हो, तपाईको आफ्नै उत्पादनहरूमा विश्वासको दृढ प्रदर्शन होइन। मलाई लाग्छ कि 3M ले यस फोटोको व्याख्या र माफी माग्ने तरिकामा प्रतिक्रिया देखाउनु पर्छ।
वाह - तपाईं धेरै शाब्दिक अवलोकनकर्ता हुनुहुन्छ! (पूरक, अपमान छैन)।
पुनः: तपाईंको आफ्नै डगफुड खाने - यो प्रणाली सफ्टवेयर हो वा विज्ञापन, यो वास्तवमै फरक पर्दैन। त्यो मेरो राय हो र म यसलाई टाँसिदै छु।
पुन: विज्ञापन - मेरो प्रशंसा विज्ञापन मा शामिल रचनात्मकताको लागि हो। यो स्टन्ट हो वा फरक पर्दैन; यसले मानिसहरूलाई उत्पादन वा सेवाको बारेमा सोच्न मद्दत पुर्‍याउँछ।
तपाईं मान्दै हुनुहुन्छ कि अभिप्राय शाब्दिक थियो - कि त्यहाँ दुई लाख मिलियन डलर बाहिर कतै कि 3M आफ्नो गिलास संग सुरक्षा छ। मेरो धारणा फरक थियो - केवल तिनीहरू एक कथा भन्न चाहन्थे। मैले चित्र देख्ने बित्तिकै, म कथा बुझ्छु।
मेरो विचारमा, म विश्वास गर्दछु कि यो एक शक्तिशाली विज्ञापन हो।
फेब्रुअरी १,, २०११ 7:१:2009 अपराह्न
त्यसोभए तपाईं भन्दै हुनुहुन्छ कि तथ्यहरू खोज्दै पछि फोटो हेर्नुको विज्ञापनको तपाईंको धारणामा कुनै असर भएन? म पूर्वानुमान गर्दछु कि सबैजना जो यस फोटोलाई हेर्दछन् र त्यसपछि सिक्छ यो एक दिउँसो स्टन्ट थियो, त्यहाँ एक सुरक्षा गार्ड थियो, तपाईं केवल गिलास लात सक्छ, र लगभग सबै पैसा नक्कली थियो - विचलित महसुस हुनेछ। यो एउटा चिनारी हो बाथरूम विज्ञापन: जब तपाइँले थाहा पाउनुभयो जुन तपाइँले सोच्नुभएको थियो त्यो वास्तवमा थिएन।
यो 3M को लागी एक महान विचार हो सार्वजनिक मा आफ्नो गिलास को शक्ति प्रदर्शन गर्न। तर किन पानाको शीशामा आराम गरी ईंटको थुप्रोको साथ सुरक्षित घन सेट अप गरेन? वा कांचको भुइँ सिर्जना गर्दै? यिनीहरूले एक महान कथा भन्छन् जुन पूर्ण रूपमा सत्य छ!
म इमानदार छैन। हामी आजकल देख्ने प्रत्येक विज्ञापनले 'कथा भन्न' अतिशयोक्ति गर्दछ, चाहे यो कार व्यवसायिक होस् वा गुगल विज्ञापन विज्ञापन। फेरी, मलाई लाग्दैन कि M मेको अभिप्राय झूट थियो, यो केवल एक रचनात्मक विज्ञापनको साथ आउनु थियो।
यस अवस्थामा, मलाई लाग्छ कि उनीहरूले राम्रो काम गरे शीशामा ढुocks्गाको थुप्रोमा असर पर्दैनथ्यो (मेरो विचारमा)। त्यो कुरा 'बल' मा तर सामग्रीको 'सुरक्षा' गर्न छैन।
अब, फोटो प्यानलमा एक मिलियन डलर छ भनेर बताउने भिडियो वा कहानी सँगै आएको थियो र यो सुरक्षा बिना सार्वजनिक स्थानमा days० दिनको लागि छोडियो… त्यसो भए म तपाईंसँग सहमत हुनेछु। जे होस्, 30M स्पॉटको साथ ती कुनै चीजहरूको साथ थिएन।
कोही पनि, तिनीहरूको दाहिने दिमागमा गएर M एम सुरक्षा गिलासबाट सुरक्षित बनेर नयाँ बैंक निर्माण गर्दैन, यो हेरेपछि? मलाई लाग्दैन।
त्यो एक धेरै शक्तिशाली दृश्य हो! र मैले सँधै 'आफ्नो डगफुड खाऊ' भन्ने भनाइलाई प्रेम गरेको छु!
फेब्रुअरी २,, २०२० १०::8। बिहान
माफ गर्नुहोस् डग, तर म यसमा रबीसँग सहमत छु। जब मैले यो तस्वीर पहिलो पटक देखेको थिएँ तब म विश्वास गर्न सक्दिन कि कम्पनीले उनीहरूको उत्पादनको बारे विश्वास गर्न सक्छ कि उनीहरूले यति धेरै पैसा लुकाउने छन, केवल मान्छेहरू यसलाई चोरी गर्ने प्रयास गर्ने हिम्मत गर्छन्।
म तपाईंको साइटमा एक टिप्पणी दिन जाँदैछु यदि उनीहरूसँग कुनै गोप्य भिडियो क्यामेरा छ व्यक्तिले (र सम्भवतः असफल भएको) गिलास तोड्न कोशिस गर्दै थिए कि भनेर।
तर एक पटक रोबीले एक सुरक्षा गार्डको बारेमा सिमीहरू खसाल्यो, केवल तपाईंको खुट्टाको प्रयोग गरेर र प्रायः नक्कली पैसा भएकोले, मैले धोका खाएको महसुस गरें।
मलाई आवश्यक पर्दैन कि M मे भन्दा कम कम्तिमा पनि सोच्दिन (म अझै पनी-यो नोटहरू पनि खरीद गर्नेछु) तर विज्ञापनले मसँग आफ्नो सबै मूल्य हराइसकेको छ र म तिनीहरूको सुरक्षा गिलास किन्नको लागि बाहिर जान सक्दिन।
फेब्रुअरी २,, २०२० १०::14। बिहान
फेब्रुअरी २०० 2005 मा शुरू गरिएको यो अभियानलाई ध्यानमा राख्दै, म भन्न चाहन्छु यसले लामो पुच्छरलाई नयाँ अर्थ दिन्छ। मलाई आशा छ PR / Marcom टोली अझै पनी आफ्नो गुगल सचेत सेट अप छ- पोस्ट को यो स्ट्रिंग तिनीहरूलाई अजीब हुनेछ।
२०० post पोस्ट: http://www.37signals.com/svn/archives/001064.php
संचार दृष्टिकोणबाट, यो तत्काल पहिचान योग्य दृश्य हो जसले ब्रान्डलाई सञ्चार गर्दछ, उनीहरूको मानहरूलाई सुदृढ गर्दछ र शक्तिशाली सन्देश प्रस्तुत गर्दछ। त्यो बस स्टपमा गर्न गाह्रो चीज हो।
अगस्ट,, २०१72009:२१ अपराह्न
रब्बी स्लोटरले मार्केटिंगको संसारलाई स्पष्ट रूपमा बुझ्दैन ... तपाईं अहिले यो कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, हैन रब्बी? ठिक छ, त्यसो भए, यस्तो देखिन्छ कि यो एक कुशल मार्केटिंग उपकरण थियो। विज्ञापन उपभोक्ताको दिमागमा एक यादगार छवि सिर्जना गर्ने बारे हो, र यो कार्य स्पष्ट रूपमा ध्यानाकर्षण गरिने छैन। तपाईंको इनने जे भए पनि यसको शुद्धता / अशुद्धता बारे छलफल गर्नु आवश्यक छ, र ध्यान दिएन कि उत्पाद वास्तवमा तपाईंले छविबाट निष्कर्षमा पुग्ने रूपमा प्रदर्शन गर्दछ ...। तपाइँ अब यसको उत्पादन को बारे मा सजग हुनुहुन्छ। अब तपाइँको टाउको मा 3M सुरक्षा गिलास को एक अमिट छवि छ। त्यसो भए? कुशल विपणन, अवधि।